Dowladda Oo Qiratay iney ku fashilantay Abaabul Dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Apr 23, 2019 298 0
Wasiiru dowlaha wasaaradda Gaashandhiga dowladda federaalka Maxamad Xagaa ayaa shaaca ka qaaday in 2000 oo askari oo katirsan ciidamada dowladda ay u xil saareen in wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho ay ka nadiifiyaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay wasiiru dowladaha in labadaas kun ee askari ay kasoo laabteen oo keliya 180 askari, halka inta kale ay noqdeen wax lagu dilo dagaallada, wax naafooba, kuwa isku dhiiba Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, iyo qaar si dhuumaaleysi ah ugu laabtay Muqdisho.
Maxamad Xagaa ayaa shaaca ka qaada yiney ku qasbanaadeen si loo badbaadiyo ciidamada yar ee soo haray in dowladda Maraykanka ka codsadaan iney ku taageerto diyaaradaha duuliye la’aanta ah ee duqeymaha fuliya.
Qirashada dowladda federaalka ee u aadan fashilka gulufkii dagaal ee ka dhanka ahaa Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kusoo aadaya iyadoo ay Mujaahidiintu sii kordhiyeen howlgallada kala duwan ee ay la beegsanayaan Shisheeyaha iyo dowladda federaalka.